Thermomix ချက်ပြုတ်နည်းများ - Bezzia | Bezzia
La thermomix ၎င်းသည်ချက်ပြုတ်ရန်အသုံးပြုသည့်စက်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အားအချိန်ချွေတာခြင်းအပြင်ဝက်အူချောင်းများ၊ စင်ကြယ်သောအရသာများနှင့်လိမ်းဆေးများကိုအခြားမည်သည့်လမ်းတွင်မျှမထားနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့် Bezzia တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အပိုင်းတစ်ခုကိုရည်ညွှန်းသည် ချက်ပြုတ်နည်းများ ဒီဟင်းလျာများအမျိုးအစားနှင့်ဤစက်သည်မည်မျှအသုံးဝင်သည်ကိုသင်အံ့အားသင့်စေမည့်အမျိုးမျိုးသောအရာများစွာရှိသည်။
အချိန်သက်သာရန်အသုံးဝင်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည့်အပြင် thermomix သည်အချက်အချာကျသောဗဟုသုတမရှိဘဲချက်ပြုတ်နည်းများကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လှည့်ကွက်များအတိုင်းလိုက်နာခြင်းဖြင့်စားဖိုမှူးအနေနှင့်ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီနည်းနဲ့ချက်ပြုတ်နည်းတွေဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုတစ်ဆင့်ချင်းအသေးစိတ်လေ့လာသွားမှာပါ။
ဒါ့အပြင်ရှိပါတယ် အားသာချက်များ သန့်ရှင်းမှုရှိရန်၊ အနည်းငယ်သောနေရာယူထားရန်နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောစကေးရှိရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ချက်ပြုတ်နည်းများကိုပိုမိုထိရောက်မြန်ဆန်စွာလိုက်နာနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
Peppa ဝက်နဲ့ဂျယ်လီပဲပြုလုပ်ပြီး Mr. Potato နှင့်ကစားသည်
por Marta Crespo လွန်ခဲ့တဲ့4အနှစ် .
မင်္ဂလာပါမိန်းကလေးများ! ဒီတိုတောင်းတဲ့ရက်သတ္တပတ်ကိုဘယ်လိုပြီးအောင်လုပ်နိုင်ပါသလဲ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြင့်လုပ်ရန်ဤနေရာတွင်သင့်ကိုအကောင်းဆုံးနှစ်ခုပေးသည်။